Wasiir Xagaa “Falkan waa mid ay argagaixsadu ku dooneyso in ay ku xagal daaciso nabadgalyada ka hanaqaaday Galkacyo” – Radio Muqdisho
Muqdisho, 28 Abriil 2018: Ku-Simaha Wasiirka Gaashaandhigga Xukuumadda Federaalka Soomaaliya, ahna Wasiiru Dowlaha Wasaaradda, Mudane Maxamed Cali Xagaa ayaa ka tacsiyeeyay dadkii shacabka ahaa, askartii iyo saraakiishii ka tirsanaa Ciidanka Xoogga Dalka Soomaaliyeed ee ku shahiiday qaraxii bahalnimada ahaa ee ay argagixisada Alshabaab ka geeysteen magaalada Gaalkacayo.
Wasiirka ayaa sheegay in qaraxaan oo uu ku shahiiday, Alle ha u naxariistee Taliyihii Ciidanka Xasilinta Gobolka Mudug, Korneeyl Cabdixakiin Cabdullaahi Maxamuud (Xorreeye) uu muujinayo dhagarta iyo dhibaatada ay argagixisada Alshabaab u maleegayaan shacabka Soomaaliyeed meel kasta oo ay joogaan.
“Innaa Lilaahi Wa innaa Ilayhi raajicuun. Waxaan uga tacsiyeynaaya shacabka Soomaaliyeed dhammaan dadkii ku shahiidday weerarkaas fuleynimada ah ee naftii halligaha ka tirsanaa argagixisada Alshabaab uu ka fuliyey magaalada Gaalkacayo, halkaas oo ay ka socoto shaqo wanaagsan oo ku saabsan xasilinta Gobolka Mudug.
“Falkan waa mid ay argagaixsadu ku dooneyso in ay ku xagal daaciso nabadgalyada ka hanaqaaday Galkacyo. Waxaan farayaa Ciidanka Isku-dhafka ah ee ku howlan xasilinta magaalada Gaalkacayo in ay dar-dar geliyaan shaqada qaran ee ay hayaan, isla markaasna ay ka hortagaan falalka arxan darrada ah ee argagixisadu ay la beegsanayaan shacabka.”
Wasiirka ayaa ku adkeeyey Shacabka Gobolka Mudug in ay ilaashadaan wadajirkooda iyo isku doobnidooda oo ah sababta ay duullaanka ku yihiin argagixisadu, iyagoona ku hamminaaya in ay dib u soo celiyaan colaaddii iyo dhibaatadii ay ka soo gudbeen shacabka Gobolka.
Ku-simaha Wasiirka, ahna Wasiiru Dowlaha Wasaaradda Gaashaandhigga ayaa sheegay in wada shaqeynta wanaagsan ee ka dhaxeysa shacabka Gobolka Mudug, laamaha ammaanka ee heer gobol iyo ciidanka Isku-dhafka ah ee xasilinta magaalada Galkacayo ay horseed u tahay sidii looga cirib tiri lahaa argagixisada Alshabaab dhammaan deegaannada Gobolka Mudug.
Dhegeyso Madaxweyne Waare ''150.000 oo qof ayaa ka barakacday Fatahaada wabiga ee Baladweyne'' (Waraysi)